HALATRA OMBY ANOSIKELY MAEVATANANA Tratran’ny miaramila ny dahalo mpamono olona
Mihorohoro amin’ny tsy fandriampahalemana indray ny vahoakan’i Maevatanana. Jiolahy raindahiny roa no saron’ny miaramila tamin’ity herinandro ity.
Ao anatin’ny fanadihadiana ny zandary any an-toerana ka mbola karohina ireo namany izay nampitondra faisana tamin’iny faritra Betsiboka sy Boeny iny.
Raha ny fampitam-baovao ofisialin’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena dia ny “ Miaramila ao amin'ny ZRPS DELTA PCIAT Maevatanàna no nahasarona ireo dahalo roa lahy izay tena malaza amin'ny fangalarana omby ary fandrahonana ary ny famonoana olona ho faty ao Andranolava Kaominina Anosikely. Ny zavatra tsapa dia hita fa mitondra aina vao sy filaminana ho an'ny mponina ny fanatonan'ny Tafika ny vahoaka toy izao”.
Ankoatra ny fampiasana ody gasy dia voalaza fa mampiasa basy mahery vaika hatrany ireo jiolahy mpandripaka ny tambanivoitra sy ny ombin’ireo tantsaha amin’iny faritra iny. Mihanaka koa ny fivarotana zava-mahadomelina ka tsy tompon’ny tenany ihany koa ireo dahalo izay mamono olona toy ny mamono akoho. Mihorohoro fatratra ny mponina hatramin’ny main-tany noho ny mankaty, indrindra tao anatin’ny vanim-potoanan’ny fifidianana izay naharevo ny mpanao politika sy ny mpanara-baovao.